Clickfor.net | Blog ọbịa | Nyefee blọgụ ndị ọbịa - Dee maka US | Akụkọ & Akụkọ ịde blọgụ | Saịtị ịde blọgụ ndị ọbịa
15 49.0138 8.38624 aro 0 aro 0 4000 1 kehoraizin https://www.clickfor.net 300 0 1
More Otu More.
Iwu 5 maka ajụjụ ọnụ ekwentị Acing maka ọrụ iwu kwadoro
Ọ bụla ogbo nke ajụjụ ọnụ usoro bụ akụkụ dị mkpa nke ihe na-akawanye gị na ikpeazụ n'ihi. Nke ahụ pụtara na ị ga-adị njikere ime ike gị niile n'ọkwa ọ bụla nke egwuregwu ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ na ị na-adọrọ mmasị na ekwentị, mgbe ahụ ị ga-achọ ịlele ise ndị a ...
Uru 5 ịbụ onye mmega ahụ nke ụtụtụ
Ọ bụ ezie na ọ dịghị oge a na-ekwu na ọ kacha mma maka ịrụ ọrụ maka onye ọ bụla, mgbatị ụtụtụ bụ ụzọ dị mma isi malite ụbọchị gị. Mgbe nkeji iri atọ a tụrụ aro ka ị na-emega ahụ kwa ụbọchị tupu ịmalite mmemme nke ụbọchị, ị ji n'aka na ọ nweghị ihe ga-egbochi ya.
Ahụmahụ okomoko kacha elu na India
Ahụmahụ okomoko 5 kacha elu na India: India bụ otu n'ime ebe kachasị dị egwu n'ụwa, yana oke okike ya na mkpa akụkọ ihe mere eme. Ma gịnị banyere inwe obi ụtọ eke a n'etiti ndị eze India? Nke a ekwe omume na njem nlegharị anya okomoko ndị a na mba ahụ. eletakwa anyị na The otú 1. The...
Vrindavan: Otu ụbọchị na ISKCON
Ụzọ 3 dị mfe iji gosi obi ekele onye isi gị
Kedu ihe kpatara ị ga-eji nyefee nhazi Visa gị n'aka ụlọ ọrụ ndị ọkachamara?
Jiri ọrụ tagzi nke Savaari chọgharịa Kolkata n'oge mkpọchi
Ihe mere ị ga-eji tinye njem ụgbọ mmiri ịhụnanya maka onye pụrụ iche
4 Pro Video edezi Atụmatụ Ị Kwesịrị Ịmara
Nhọrọ maka Chromecast ị nwere ike ịtụle maka TV gị
Chebe akụ dijitalụ gị na ngwọta nchekwa Kaspersky na ngwa Ekele Airtel
Ụzọ 5 dị mfe ma dị irè iji chekwaa ike
Nwere ike 3, 2022
Kedu 6bt Cummins kacha mma maka mgbanwe gị?
Igwe mmanụ dizel 6-cylinder aghọwo nke na-ewu ewu na ụlọ ọrụ na-ebu ibu n'ihi na ha na-enye akụ na ụba mmanụ ka mma na ịnya ụgbọ ala ka mma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-arụ gwongworo na-enye injin Diesel 6-cylinder dị ka ọkọlọtọ. Taa, ị nwere ike ịhọrọ site na narị ụdị gwongworo dị iche iche n'ụwa niile. Dabere na mkpa gị, ị nwere ike ịchọ ịgbanwe 6-cylinder gị ... GỤKWUO
Kedu ka esi azụta Crypto na Ukraine?
Ụlọ ọrụ crypto egosila ọganihu dị ukwuu n'ime afọ abụọ gara aga. Ọtụtụ ikpo okwu maka ịmekọrịta akụ dijitalụ na-apụta n'ahịa, ọrụ crypto na-etolite ngwa ngwa. N'ihi nke ahụ, ọtụtụ ndị na-enwebughị mmasị na mpaghara crypto malitere iche ebe ha ga-azụta cryptocurrency... GỤKWUO
Otu esi ahọrọ ọrụ nlekọta ahịhịa ọka ọkachamara
Ị maara na nkezi ndị America na-etinye ihe ruru awa 70 kwa afọ na-arụ ọrụ n'ogige ma ọ bụ ubi ha? Itinye ego na nlekọta ahịhịa nwere ike bụrụ ụzọ dị ngwa iji tinye awa dị oké ọnụ ahịa azụ n'ime izu ụka gị. Ma ị na-achọ nlekọta ụlọ mgbe niile ma ọ bụ ndị ọkachamara iji dozie nsogbu dị mgbagwoju anya, ịnweta ọrụ nlekọta ahịhịa nwere ike ... GỤKWUO
Aka mgbata biya pụrụ iche maka Kegerator gị
Aesthetics nke ịṅụ biya dị ezigbo mkpa. Zụta aka mgbata biya pụrụ iche iji mee ka oge ntụrụndụ gị mara mma. Chọta aka mgbata biya kacha mma na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke Beverage Craft. Aka aka mgbata biya kacha mma nke na-eme Kegerator gị pụrụ iche na nke mara mma yana aka mgbata biya dị ịtụnanya ka achọrọ ma maka ị drinkingụ mmanya ... GỤKWUO
Edemede bụ otu n'ime akụkụ ndị a na-eleghara anya nke imepụta vidiyo. Ma, ọ bụ otu n'ime ihe kacha mkpa. Ọ bụ ihe na-atụgharị usoro mkpachị na-enweghị usoro ka ọ bụrụ akụkọ! Nke a bụ ihe na-agbanyeghị, na video edezi. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ gị nke ọma, ọ dịghị onye ga-achọpụta na ọ dị mma. Kama, ha ga-abụ ... GỤKWUO
Ịhọrọ asambodo n'etiti CCSP (ọkachamara Cloud Security Professional) na CISSP (Ndị ọkachamara na-ahụ maka nchekwa nchekwa ihe ọmụma) bụ nke siri ike. Ebe ọ bụ na asambodo abụọ ahụ yiri otu ụlọ ọrụ aha ya bụ (ISC)2 (International Information System Security Certification Consortium) mebere ya. Ị nwere ike ịhọrọ cert nke ịchọrọ ịme dabere n'ihe ịchọrọ ... GỤKWUO
Uru 5 dị ịtụnanya nke ahịa dijitalụ maka azụmaahịa
Ị ga-ahụ ụkpụrụ na-adịghị ahụkebe ma ọ bụrụ na ị na-eme nchọgharị na ọnụ ọgụgụ ahịa dijitalụ. Nyochaa data maka akụkụ ọ bụla nke ahịa dijitalụ - mgbasa ozi mgbasa ozi, SEO, email - ị ga-achọpụta na data ahụ na-egosi mgbe niile usoro elu. Ma eleghị anya, nke ahụ bụ n'ihi na ịntanetị dị obere ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ihe ọgbara ọhụrụ. Ọ bụrụ otú ahụ,... GỤKWUO
Atụmatụ nchekwa 5 kacha mma maka ụgbọ ala gị na 2022
Ị nwere ike ịbụ onye ọkwọ ụgbọ ala kacha mma n'ụwa, mana ị nweghị ike ịkọ mgbe niile ka ndị ọzọ nọ n'okporo ụzọ ga-esi akpa àgwà. Mmadụ nwere ike gbapụ gị ọsọ ọsọ site n'ebe ị kpuru ìsì ma ọ bụ breeki na mberede mgbe ị na-eghe. Mgbe nke ahụ mere, atụmatụ nchekwa ụgbọ gị nwere ike ịzọpụta ndụ gị. Ọtụtụ ụgbọ ala ọgbara ọhụrụ nwere ọtụtụ ... GỤKWUO
Chromecast bụ naanị otu teknụzụ kachasị mma iji tụgharịa ọdịnaya nkedo site na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba n'ihuenyo buru ibu. Ọ bụ nnọọ mfe jikọọ na TV na bụ nnọọ mfe iji. Mana dịka onye ọrụ, ịkwesịrị ịme mkpebi mara mma ma a bịa n'itinye ego na teknụzụ ọ bụla. Bụrụ... GỤKWUO
Ka ụwa anyị na-abawanye na ntanetị ma ọ bụ ụwa dijitalụ, ihe ize ndụ maka mwakpo cyber na-apụtawanye ìhè. Kwa sekọnd 39 ọ bụla, enwere mwakpo cyber na-eme ebe n'ụwa. Nke ahụ bụ ihe karịrị mwakpo cyber 2,200 kwa ụbọchị. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị egwu maka ụwa nke na-agbanwe n'ịntanetị ... GỤKWUO
1 2 ... 56 EKWỤKWỌ NDỊ KA Ochie
Otu esi ahọrọ onye nlekọta ahịhịa ọka ọkachamara...
Aka mgbata biya pụrụ iche maka Kegerat gị...
2020 Clickfor.net. IKIKE NIILE ECHEKWABARA.